Ungazidlulisa kanjani izithombe zisuka ku-iPhone ziye kwikhompyutha | Izindaba ze-IPhone
Ungazidlulisa kanjani izithombe zisuka ku-iPhone ziye kwikhompyutha
U-Ignacio Sala | | iPhone, Okokufundisa namanyuwali
Ukwethulwa kwe-iPhone 7 kube ukuphela kwemishini inkampani eyethule nge-16 GB, isikhala sokugcina esishiye cishe kungekho ndawo yokuhambisa kubasebenzisi abathenga le modeli. Ngenhlanhla, wonke amamodeli ahlinzekwa yi-Apple, kokubili ku-iPhone naku-iPad anikela ngo-32 GB wesitoreji, isikhala esingenza okungaphezu kwesigamu sesikhala, isikhala esasingakaze sibe sangempela ngoba uma ususephule isikhala ukuthi uhlelo lokusebenza olusebenzelayo besinokuncane okungaphezulu kokungu-11 GB okusele.
Njengoba sisebenzisa idivayisi yethu, kungaba ngokufaka izinhlelo zokusebenza noma ukurekhoda amavidiyo nokuthatha izithombe, isikhala siyancipha ukuze siphoqeleke ukusixhuma kwikhompyutha yethu, kungaba yi-PC noma iMac ukukhipha le divayisi futhi, ngenhlanhla, isipele izithombe namavidiyo esiwenzile kuze kube manje. Lapho uxhuma i-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu kwikhompyutha yethu, kufanele sikhumbule ukuthi izindlela zokukhipha okuqukethwe esikugcinile zihlukile kuzinhlelo zombili zokusebenza, zihlala zithola umphumela ofanayo ekugcineni.
1 Izindlela zokudlulisa izithombe kusuka ku-iPhone ziye kwi-Mac
1.1 I-Tenorshare iCareFone
1.1.1 Yeqa kuphela izithombe ezikhethiwe
1.2 Izithombe zohlelo lokusebenza
1.3 Zigcinwa kuphi izithombe esizifaka kuhlelo lokusebenza lwezithombe ku-Mac yethu?
2 Ukudluliswa Kwemininingwane ye-iPhone - i-EaseUS MobiMover
3 Ungazidlulisa Kanjani Izithombe zisuka ku-iPhone ziye kwiWindows
3.2 Indlela yendabuko
3.3 Ngenisa izithombe namavidiyo
4 Ungazidlulisa Kanjani Izithombe kusuka ku-iPhone ziye ku-Cloud
4.1 Izithombe zeGoogle
4.3 I-Amazon Cloud
Izindlela zokudlulisa izithombe kusuka ku-iPhone ziye kwi-Mac
iCareFone ingenye yesoftware ephelele kunazo zonke esingathola kuyo namuhla khipha izithombe namavidiyo ku-iPhone, iPad noma iPod touch yethuUma singafuni ukwenza impilo yethu ibe yinkimbinkimbi ngezinketho ezahlukahlukene ama-macOS asinikeza zona ngokwendabuko, kanye neWindows, ngezindlela eziyinkimbinkimbi kakhulu futhi ezingekho enembile kakhulu.
Isixazululo esisinikezwa yiTenorshare iCareFone kusivumela ngaphezu kwe ngokushesha thumela izithombe namavidiyo ethu kusuka kudivayisi ye-iOS uye kwikhompyutha, kungenzeka ukudlulisa lolu hlobo lokuqukethwe kusuka ku-iTunes kuya kudivayisi yethu noma okuphambene nalokho, noma kuleyo ndatshana sizogxila enkambeni yokuqala engikhulume ngayo.
Dlulisa izithombe ze-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yakho ngohlelo lwe-Tenorshare iCareFone kuyinqubo elula kakhulu futhi esheshayo, sicubungule imininingwane engezansi.
Okokuqala, uma sesivulile isicelo, kufanele xhuma i-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu kwikhompyutha. Uma esikrinini sedivayisi, usibuza ukuthi ngabe sifuna ukunika imvume ikhompyutha ukuze ikwazi ukufinyelela kokuqukethwe, chofoza ku-Trust, ngoba kungenjalo, idivayisi ngeke ikwazi ukuxhumana nekhompyutha, ngakho-ke uhlelo lokusebenza esizolisebenzisa.
Okulandelayo, chofoza kukho Chofoza ngokuchofoza okukodwa izithombe ku-PC. Ngalesi sikhathi, uhlelo lokusebenza luzothumela zonke izithombe namavidiyo esiwagcine ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu, ngaphandle kokuthi sikhethe ukuthi iziphi izithombe esifuna ukuzithumela.
Lapho inqubo isiqedile, iwindi elisha lizovuleka ngokuzenzekelayo lapho ifolda lapho zonke izithombe zitholakala khona izokhonjiswa esikhishwe kudivayisi yethu. Okulandelayo, kufanele siqhubeke ngokuya ngezidingo zethu: sabelane ngazo nabangane bethu, ukopishe kwi-hard drive yangaphandle ukuze ube nesipele ...
Yeqa kuphela izithombe ezikhethiwe
Indlela eyedlule ayisiyona kuphela i-iCareFone esinikeza yona, ngoba ngaphezu kwalokho, nathi singakwazi kopisha inani elilinganiselwe lezithombe ezisuka ku-iPhone yakho ziye kwikhompyutha yakho. Ukuze senze lokhu, kufanele sichofoze kusithonjana sesibili esingezansi kohlelo lokusebenza futhi esimele isithombe.
Okulandelayo, kukholamu yesobunxele, sikhetha izithombe ukuze kukholamu yesokudla zonke izithombe ezigcinwe kudivayisi ziboniswe. Esigabeni esilandelayo kufanele khetha ngamunye ngamunye, izithombe esifuna ukuzikhipha kwi-iPhone yethu bese uchofoza inkinobho Ukuthekelisa. Ekugcineni kumele khetha ukuthi iyiphi umkhombandlela sifuna ukugcina izithombe esizokhipha kuzo i-iPhone yethu.
I-Tenorshare iCareFone iyatholakala kuzo zombili IWindows ngokuqondene neMacOS.
I-Apple izamile ukwenza lo msebenzi ube lula ngangokunokwenzeka ngokuhlanganisa uhlelo lokusebenza lwezithombe ohlelweni lokusebenza, uhlelo lokusebenza olubhekele ukufinyelela kudivayisi yethu futhi khipha okuqukethwe ezithombeni nakwividiyo esiyenzile ukuyikopisha esicelweni ngendlela yokuthi abasebenzisi abaningi bangakuthola kuhlekisa, ngoba ngokomzimba akusiniki ukufinyelela kuwo wonke amafayela ukuze sikwazi ukuwakopisha, ukuwahambisa noma ukuwasusa ngokuya ngokubaluleka kwethu. Sizoyixazulula le nkinga ngemuva kwesikhashana.
Ngendlela yendabuko, ngaso sonke isikhathi lapho sixhuma i-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu kwi-Mac, uhlelo lokusebenza lwezithombe luvula ngokuzenzekelayo, lubonise izithombe zakamuva esizithathile namavidiyo akamuva. Ukukhipha izithombe esifuna ukuzigcina ngokuzimela noma ezigcinwa ngokuzenzekelayo kuhlelo kumele sizikhethe bese sicindezela ukhiye Ngenisa ukukhetha (1), etholakala engxenyeni engenhla yesicelo. Ngaphezu kwalokho, uma ngendlela esifuna zisuswe ngayo lapho sesizidlulisele ku-Mac yethu kufanele sihlole ibhokisi Susa izinto ngemuva kokungenisa (2).
Singakhetha futhi ukungenisa inketho entsha (3), ukuze uhlelo lokusebenza lwe-Photos lwe-Mac yethu, luzilawule ngokuzenzakalela ngokulanda zonke izithombe esizithathe kudivayisi yethu selokhu sagcina ukuyixhuma. Uma singakaze sikuxhume kuhlelo lokusebenza lwezithombe, uhlelo lokusebenza luzongenisa zonke izithombe namavidiyo atholakala ku-iPhone, iPad noma i-iPod touch yethu.
Ukwenza lula lo msebenzi Singaya esigabeni sama-albhamu (4), esisekholomu yesokudla lapho uzothola khona wonke ama-albhamu ahlukene enziwe uhlelo lokusebenza (Abantu, Izindawo, Ama-Selfies…) nalawo esikwazile ukuwenza kudivayisi yethu.
Lapho inqubo yokungenisa isiqediwe, zonke izithombe zizokhonjiswa esigabeni sama-albhamu ngaphansi kwesihloko sokugcina sokungenisa. Lapho sesiyekile ukusebenzisa uhlelo lokusebenza futhi siluvale, ngokuzenzakalela uhlelo lokusebenza luzoqala ukuhlukanisa izithombe ngabantu, izindawo, amavidiyo, izithombe-skrini ... (5).
Zigcinwa kuphi izithombe esizifaka kuhlelo lokusebenza lwezithombe ku-Mac yethu?
Yebo, manje sinezithombe namavidiyo ku-Mac yethu ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwezithombe, kepha Bebeyephi? Ukuze sikwazi ukufinyelela ezithombeni nakumavidiyo esiwakhiphe kwi-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu, kufanele siye ku-Isitholi bese uchofoza ku-Izithombe futhi ungayifaki esigabeni esifanele, ngenhla nje Umtapo Wezithombe .photolibrary bese uchofoza inkinobho engakwesokudla bese ukhetha Khombisa okuqukethwe kwephakeji. Ewindini elisha elizokhonjiswa sizothola izithombe zethu ngaphakathi kwesiqondisi seMasters, ezihlukaniswe iminyaka nezinyanga.
Uhlelo lokusebenza lwe-Image Capture alusivumeli nje kuphela ukuthi sikhiphe izithombe namavidiyo kudivayisi yethu, kodwa futhi lusivumela ukuthi sithole izithombe kusuka kumakhamera, kumakhamera wevidiyo noma kumadivayisi okuskena axhunywe kwi-Mac. Lolu hlelo lokusebenza alukho ku-MacOS Dock, ngakho-ke kufanele siyifinyelele ngeLaunchpad> Abanye.
Lapho nje siqalisa uhlelo lokusebenza, kufanele silinde imizuzwana embalwa kuze kube yi-Mac yethu bona idivayisi yethu ukuze sikwazi ukufinyelela izithombe namavidiyo esiyigcine kuyo futhi ngaleyo ndlela sikwazi ukuyikhipha. Ukuze senze njalo kufanele sikhethe bona bese sibahudulela kufolda lapho sifuna ukugcina khona ikhophi yabo bonke.
Futhi singakhetha umkhombandlela wendawo lapho sihamba khona bese uchofoza ku-Import all key, uma esikufunayo ukukhipha zonke izithombe namavidiyo kusuka kudivayisi yethu. Lapho sesenze ikhophi lezithombe namavidiyo, singaqhubeka sizisuse ngqo noma sizihudulele ngqo kudoti ku-Mac yethu.
Ngeshwa I-iTunes ayakhelwanga ukuthi sikwazi ukukhipha izithombe kudivayisi yethu, into okunzima ukuyiqonda futhi ephoqa ukuthi sisebenzise izinhlelo zangaphandle noma izindlela eziyinkimbinkimbi, ikakhulukazi uma singasebenzisi iMac. Nge-iTunes into esingayenza ukugcina ikhophi yokusekelayo yedivayisi yethu yonke futhi ngokuhamba kwesikhathi ukukhipha izithombe ngolunye uhlelo lokusebenza, inqubo eyinkimbinkimbi kakhulu ngoba idinga ukufaka uhlelo lokusebenza ngqo lokho nokuthi ngeke sikhulume ngalo kulesi sihloko.
Singasebenzisa futhi i-iFoto noma i-Aperture, njengoba i-itunes isho, kepha zombili izinhlelo zokusebenza azisasekelwa yi-Apple, ngakho-ke ngeke sibabheke kule ndatshana njengezinketho ezitholakalayo. I-iTunes isivumela ukuthi sikopishe izithombe namavidiyo kusuka ku-Mac yethu siye kudivayisi. Ukuze senze lokhu kufanele nje sikhethe amafolda lapho kutholakala khona izithombe esifuna ukuzidlulisa futhi sivumelanise idivayisi.
Ezikhathini ezedlule sikhulume nge-iMazing, enye indlela eya ku-iTunes esingakwazi ukukhipha ngayo izithombe zethu kuphela, kepha futhi n tSingangeza futhi noma sisuse izincwadi, umculo, amanothi ngaphezu kokwenza izinqubo ezehlukene naye. Ukuze sikhiphe izithombe noma amavidiyo esiwathandayo, kufanele nje sixhume idivayisi yethu kwi-Mac, sifake uhlelo lokusebenza bese siya esigungwini sethu, esisekholamu lesokudla.
Okulandelayo, chofoza kuKhamera ukuze izenzekele ama-albhamu ahlukene esiwakhile aqala ukukhombisa. Qhafaza kabili ku-albhamu esifuna ukukhipha kuyo izithombe, zikhethe bese uqhafaza ku-Export, etholakala ekhoneni elingezansi kwesokudla sohlelo lokusebenza.
Manje kufanele nje sikhethe umkhombandlela lapho sifuna ukugcina khona izithombe bese uchofoza ku-Khetha. Izithombe namavidiyo akhethiwe azoqala ukulanda ku-Mac yethu.
Lapho sesithumele izithombe ezikhethiwe, siya ekhoneni elingezansi kwesokudla bese uchofoza ku-Delete, to susa izithombe esizikopishele ku-Mac yethu ku-iPhone futhi ngaleyo ndlela sikwazi ukuthola isikhala kudivayisi yethu. IMazing ibiza ngo- € 39,99 futhi iyatholakala kuzo zombili i-PC ne-Mac. Uhlobo lwesivivinyo lukhawulela inani lezithombe namavidiyo ongalingenisa lize lifike kuma-50 kuseshini ngayinye, ukuze ukwazi ukulanda ifilimu yakho ngezikhathi ezithile ngohlobo lwecala.
Lolu hlelo lokusebenza bekulokhu kuhlobene nabasebenzisi be-jailbreak, kepha akusisizi kuphela ukufaka noma ukususa amafayela we -ipa. Nge-iFunbox, uhlelo lokusebenza lwamahhala, singakwazi, njenge-iMazing, ukukhipha zonke izithombe esizigcine kudivayisi yethu, ngokushesha futhi kalula. Ukwenza lokhu kufanele nje siye kuKhamera bese ukhetha zonke izithombe esifuna ukuzikhipha kudivayisi yethu. Ngemuva kwalokho siya kwimenyu ephezulu bese uchofoza ku-Copy to Mac.
Ngemuva kwalokho kufanele sikhethe umkhombandlela lapho sifuna ukugcina khona izithombe namavidiyo wethu bese uchofoza ku-Khetha. Ukuzisusa, kufanele nje sicindezele ukhiye we-fn + susa futhi siqinisekise ukususwa kwazo zonke izithombe esizikhethile ngaleso sikhathi nokuthi kufanele ngabe sesivele siphephile kwi-Mac yethu.
Landa iFunbox mahhala.
Ukudluliswa Kwemininingwane ye-iPhone - i-EaseUS MobiMover
Ngezinye izindlela ngeke kube, lokho kucacile. Olunye uhlelo lokusebenza olusivumela ukuthi sikwenze ngokuphelele ngaphandle kwe-iTunes lapho sidlulisa izithombe ezisuka ku-iPhone yethu siziyisa kukhompyutha, kungaba yi-PC noma iMac, i-iPhone Data Transfer, uhlelo olusivumela kopisha zonke izithombe ezigcinwe ku-iPhone, iPad noma iPod touch yethu kwi-PC noma kwi-Mac ngendlela elula kakhulu.
Ngokudluliswa kwedatha ye-iPhone, asikwazi kuphela khipha izithombe kusuka kudivayisi yethu, kepha ngaphezu kwalokho, kusivumela nokuthi sikopishe okuqukethwe ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu kusuka kwi-PC noma i-Mac ngaphezu kokudlulisa okuqukethwe kusuka kukhompyutha yethu kuya kudivayisi yethu.
Ukudlulisa izithombe kusuka ku-iPhone yethu kuya kwi-PC noma kwi-Mac, futhi sikwazi ukwenza ikhophi eyisipele, kufanele sikhethe inketho Idivayisi eya ku-Mac. Okulandelayo, kufanele sixhume i-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu kwikhompyutha ukuze iyibone futhi siyikhethe njengomthombo wedatha.
Okulandelayo, sikhetha inketho yokuqala, Izithombe futhi ekugcineni, kufanele sikhethe ifayela le- ifolda yokuya lapho sifuna khona ukuthi izithombe esifuna ukuzikhipha kwi-iPhone yethu zikopishwe. Ukuqala inqubo, kufanele sicindezele inkinobho yokudlulisa.
Ngokuya ngenani lezithombe namavidiyo, nosayizi abahlala kuwo (ikakhulukazi owokugcina), inqubo ingathatha isikhathi esiningi noma esincane, ngakho-ke uma singazidlulisanga izithombe zethu kwi-PC isikhathi eside, singakuthola kulula.
Ukudluliswa kwedatha ye-iPhone kuyinto itholakalela iWindows kanye neMac.
Ungazidlulisa Kanjani Izithombe zisuka ku-iPhone ziye kwiWindows
Uma kukhulunywa ngokukhipha zonke izithombe noma amavidiyo esiwagcine ku-PC yethu, uma sijwayele uhlelo lwefayela le-Windows, kungenzeka ukuthi indlela elula kunazo zonke esiyisebenzisile ezimpilweni zethu zonke ukuze sikwazi ukubonisana +
Ngeshwa uhlelo lwe-iTunes, esingaphatha ngalo ukuthi iziphi izinhlelo esizifaka kwidivayisi yethu, kanye namavidiyo, umculo, izincwadi nezithombe ayisivumeli ukuthi sikhiphe izithombe kunguqulo ye-Windows, njengenguqulo ye-Mac, ngakho-ke siyaphoqeleka ukuthi sisebenzise ezinye izindlela ezingekho emthethweni. Vele, kuyadingeka ukuthi ifakwe kwi-PC yethu ukuze ikwazi ukufinyelela ngqo kudivayisi ukuze ikwazi ukukhipha izithombe ngenye indlela.
Uma sijwayele uhlelo lwefayela futhi ngathi ukukopisha nokunamathisela amafayela kuyindlela yosuku, indlela elula yokukwazi ukukhipha izithombe kwi-iPhone, iPad noma i-iPod touch yethu ngokusebenzisa i-Windows file Explorer. Okudingekayo kuphela ukuze ukwazi ukuthola izithombe ngale ndlela ukuthi ufake i-iTunes ongayilanda ngokusebenzisa isixhumanisi esilandelayo.
Lapho sesixhume idivayisi yethu kwi-Windows PC, siya kudrayivu ezovela ku-My Computer. Okulandelayo, kufanele nje siye kumafolda ahlukile, ngamagama angasitsheli ukuthi okuqukethwe kwabo kungaba yini, khetha zonke izithombe, uzinqume bese uzinamathisela enkombeni ku-PC yethu lapho sifuna ukuzigcina khona.
Khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho sidlula izithombe eziyi-1.000 XNUMX kudivayisi yethu, isiqondisi esisha senzelwe ukuwagcina, ngakho-ke kufanele sihlole wonke amafolda ukuze siqiniseke ukuthi sikhiphe zonke izithombe ebesizothatha nge-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu.
Ukuphequlula izinkomba, sizothola futhi izithombe esizithole ngezinhlelo zokuthumela imiyalezo, izithombe ezingekho enkombeni efanayo lapho izithombe noma ividiyo esiyenzayo igcinwa khona, ngakho-ke uma singafuni ukuyilahla, kulula ukuyifaka ekukhishweni.
Ngenisa izithombe namavidiyo
Le nketho ifana kakhulu naleyo enikezwa uhlelo lokusebenza lwe-Capture Image ku-macOS. Lo msebenzi ayitholakali ngamamenyu, Okungenani selokhu kwafika iWindows 10, ukuze siyifinyelele kufanele nje siye kuyunithi eyenziwe yidivayisi yethu bese sichofoza inkinobho yegundane langakwesokudla bese ukhetha ukungenisa izithombe namavidiyo.
Ngemuva kwalokho kuzoqala funda wonke amafayela namavidiyo esiwagcinile kudivayisi futhi lokho kungakopishelwa kwiWindows PC yethu.
Esinyathelweni esilandelayo sikhetha umkhombandlela lapho sifuna ukugcina khona izithombe namavidiyo wethuyebo, kodwa ngaphambi kokuchofoza Okulandelayo, siya ku- Izinketho eziningi.
Ngaphakathi kwale menyu, singakhetha ifomethi esifuna ukuthi izithombe zigcinwe ngayo kudivayisi yethu. Kepha, ngaphezu kwalokho, singakwazi hlola ibhokisi Susa amafayela kusuka kudivayisi ngemuva kokungenisa ukuze ngokuzenzakalela lapho ukungenisa kuqediwe, amavidiyo nezithombe kuyasuswa ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu.
Ukuqedela inqubo, chofoza okulandelayo bese silinda inqubo ize iqede.
Njengakwi-Mac, uma singafuni ukusebenzisa izinketho ezinikezwa isistimu yokusebenza ngokwendabuko, njengakule ndlela yendabuko yokuphathwa kwamafayela, singasebenzisa lolu hlelo lokusebenza, uhlelo olusivumela ukuthi sikhiphe konke izithombe zedivayisi yethu ngokushesha futhi kalula. Ukuze senze lokhu, kufanele sixhume i-iPhone yethu kwi-PC, sivule uhlelo lokusebenza, khetha Ikhamera kukholamu yesokudla ukubonisa zonke izithombe namavidiyo atholakalayo. Okulandelayo, sichofoza ukuthekelisa, esisekhoneni elingezansi kwesokudla bese siya enkombeni lapho sifuna ukuwagcina khona.
Uma sekugcinwe kudivayisi yethu singaqhubeka nokuzisusa ngqo kusuka kuhlelo lokusebenza, ngokusebenzisa inketho etholakala ekhoneni elingezansi kwesokudla futhi elibizwa ngokuthi Susa. IMazing ibiza ngo- € 39,99
La Isicelo samahhala se-iFunbox siyindlela engcono kakhulu uma singafuni ukusebenzisa izinhlelo ezikhokhelwayo ukwazi ukulanda okuqukethwe wumakhalekhukhwini wethu kwi-Windows PC, ngoba futhi iyahambisana nohlelo olusebenzayo lweMicrosoft, hhayi iMac kuphela. Ukuqhubeka nokulanda okuqukethwe yizithombe namavidiyo esiwagcine kudivayisi yethu , sizoqhubeka ngendlela efanayo neMazing, ngoba, yize isikhombimsebenzisi sihlukile, inqubo icishe ifane.
Lapho sesilande futhi safaka uhlelo lokusebenza sixhuma idivayisi yethu.
Lapho uhlelo lokusebenza lukuqaphela, luzosikhombisa kukholamu engakwesokudla konke ongakhetha ukukopisha kusuka noma kuye kudivayisi.
Chofoza kuzithombe / isithombe ukuze zonke izithombe esinazo kwi-iPhone, iPad ne-iPod touch yethu ziboniswe, kanye namavidiyo esiwarekhodile ngedivayisi yethu.
Sikhetha izithombe esifuna ukuzilanda kudivayisi yethu bese siya ku-Export / Copy to PC button.
Uma sezilandelwe kwi-PC yethu, kufanele nje sichofoze inkinobho ethi Susa / Susa ukuze ususe zonke izithombe kusuka kudivayisi yethu.
Ungazidlulisa Kanjani Izithombe kusuka ku-iPhone ziye ku-Cloud
Yize ezimeni eziningi kungcono ukukopisha zonke izithombe zethu kwi-PC noma kwi-Mac ukuze uzigcine kamuva kwi-hard drive yangaphandle, hhayi bonke abasebenzisi abasebenzisa i-PC noma i-Mac.Kubo bonke labo basebenzisi, kukhona futhi okungenzeka hhayi ngaphandle kokugcina zonke izithombe namavidiyo wakho efwini futhi lapho amafayela adinga ukuya efwini elisetshenzisiwe nokulanda okuqukethwe kwawo. Empeleni Insiza ehamba phambili, ngaphezu kwamahhala, etholakalayo yalolu hlobo lomsebenzi itholakala ku-Izithombe ze-Google, ngoba isinikeza indawo yokugcina engenamkhawulo yezithombe ezinokulungiswa okungaphansi kuka-12 mpx namavidiyo anesisombululo se-HD ephelele. Konke okudlula lapho, singakugcina, kepha isikhala esisetshenzisiwe sizokwehliselwa kulowo esesenze naye isivumelwano.
Noma kungabonakala kungajwayelekile lokho ngohlelo lokusebenza singaba nezithombe esizithandayo futhi sithole isikhala esingeziwe kudivayisi yethu, kunjalo. Izithombe zeGoogle zisivumela ukuthi silondoloze ikhophi yawo wonke amavidiyo nezithombe esizithwebulayo nge-iPhone yethu efwini. Lapho sishoda ngesikhala, uhlelo lokusebenza luzosinikeza ithuba lokususa izithombe namavidiyo asevele agcinwe efwini le-Google.
Khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uxhuma kunethiwekhi ye-Wi-Fi (noma ungayenza ngaphezu kwe-4G, noma kunganconyiwe) Izithombe ze-Google zikopisha zonke izithombe namavidiyo ukuthi senze efwini nokuthi bebengekho kulo, ngakho inqubo yokusula idivayisi yethu iphephe ngokuphelele.
Kwaphela iminyaka embalwa, abafana baseCupertino baqala nikela ngezinhlelo ezintsha zokugcina, izinhlelo ezikhuphukela ku-2 TB futhi lapho singagcina khona cishe yonke into, ngoba ayiseyona insiza yokugcina ehlukile kunaleyo ejwayelekile, noma isenakho izici zayo.
Onke amakhasimende e-Amazon Premium anawo uhlelo lokugcina olungenamkhawulo efwini le-Amazon, insizakalo esivumela ukuthi sigcine amavidiyo amaningi njengezithombe zedivayisi yethu esiyifunayo esinqumweni sayo sokuqala futhi ngaphandle kokunye ukubhala okuncane. Uma ungumsebenzisi wale sevisi, le nketho inganconywa kakhulu ngezidingo zesikhala sakho, noma ngabe zicacisiwe noma ziyaqhubeka ngokuhamba kwesikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungazidlulisa kanjani izithombe zisuka ku-iPhone ziye kwikhompyutha
Ngisanda kuthola uhlelo oluwusizo kakhulu lokuphatha izithombe ze-iPhone - CopyTrans Photo!
IOS 14 izoletha ushintsho kusikrini sasekhaya
I-HomeKit ku-iOS 14 izothuthukisa ukubonwa kobuso, ingeze i-Night Shift futhi ithuthukise umsindo we-HomePod